AIRBNB inotaura pamusoro pechisarudzo cheDare repamusoro pamusoro pekurambidzwa kwekufamba kweUS
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » AIRBNB inotaura pamusoro pechisarudzo cheDare repamusoro pamusoro pekurambidzwa kwekufamba kweUS
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Iran Kuputsa Nhau • Libya Kupwanya Nhau • nhau • North Korea Kuputsa Nhau • vanhu • Somalia Kuvhuna Nhau • Siria Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Venezuela Kupwanya Nhau
Nhasi, Dare Repamusorosoro reUS rakafunga kutsigira kurambidzwa kwekufamba kwakagadzirwa nehutongi hwaTrump. Kurambidzwa kunotadzisa vanhu vanobva kuIran, Libya, Somalia, Syria, Venezuela, uye kunyangwe America "mubatsiri mutsva" North Korea, kupinda muUnited States.
Iyi ndiyo yechitatu vhezheni yekurambidzwa kwekufamba kubvira payakatangwa uye mushure mekumhanya mumatare akasiyana siyana. Pakutanga, vatsoropodzi vakadaidza vhezheni dzapamberi kurambidzwa kwemaMuslim, asi, izvozvi vava kufanira kufunga nezvenyaya iyi izvozvi sezvo kurambidzwa kunosanganisirawo Venezuela neNorth Korea. Nyika dzakatumidzwa dzirimo pachinyorwa nekuti hutungamiriri hwaTrump hunoti vangangotyisidzira kana kusabatana neUS.
Airbnb Co-founders, Brian Chesky, Joe Gebbia, naNathan Blecharczyk, vane izvi zvekutaura nezve yazvino vhezheni yechirambidzo uye nedare reSupreme Court rekuzvitsigira:
Takanyadziswa zvikuru nechisarudzo cheDare. Kurambidzwa kwekufamba inzira inopesana nebasa redu uye hunhu - kudzora kufamba kunoenderana nerudzi rwemunhu kana chitendero zvakaipa.
Uye apo nhau dzanhasi dzichidzosera kumashure, isu tichaenderera mberi nekurwa nemasangano ari kubatsira avo vakakuvara. Airbnb ichave ichifananidza mipiro kuInternational Refugee Assistance Project (IRAP) kusvika pamadhora zana nemakumi mashanu emadhora kusvika munaGunyana 150,000, 30 kutsigira basa ravo vachitsigira shanduko yesystem uye nzira dzepamutemo kune avo vanokanganiswa nekurambidzwa kwekufamba. Kana uchida kubatana nesu, unogona ipai apa.
Tinotenda kuti kufamba chiitiko chinoshandura uye chine simba uye kuti mabhiriji ekuvaka pakati petsika nenharaunda anogadzira nyika ine hunyanzvi, yekubatana pamwe uye yakafemerwa. KuAirbnb, isu tinotenda zvikuru kunharaunda yedu inozoramba ichivhura misuwo kutenderera pasirese kuitira kuti pamwe chete, tifambe kuenda kumberi.